Ogaden News Agency (ONA) – Dawlada Faransiiska oo Adkaysay Amaanka Xadka Ay Belgium ka Lawadaagto.
Dawlada Faransiiska oo Adkaysay Amaanka Xadka Ay Belgium ka Lawadaagto.
Posted by ONA Admin	/ March 21, 2016
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dalka Faransiiska ayaa lagu wadaa in ay kordhiso ammaanka xadka uu dalkaasi la wadaago dalka Belgiumka. Arrintani waxay daba joogtaa qabashada ninka lagu tuhunsanyahay weerarka Paris, Saalax Cabdisalaam oo lagu qabtay magaalada Brussels Jimcihii.
Bernard Cazeneuve waxuu sheegay in ciidamo dheeraad ah lagayn doono xadka Belgium si looga fejignaado weeraro laga yaaba in ay dhacaan. Dacwad oogayaasha dalka Faransiiska ayaa waxa ay sheegayaan in Salax Cabdisalam uu sheegay inuu doonayay inuu isqarxiyo intuu socdeen weeraradii Paris ee bishii November, laakiin maskaxdiisa uu badalay.
Saalax waxaa looga shakisan yahay inuu abaabulay weeraradaasi Paris lagu qaaday sanadkii hore. Waxaa lagu oogay dacwad kusaabsan dil iyo inuu kamid ahaa koox “argagixiso.” Dacwad oogayaasha waxa ay sheegayaan in Saalax uu xudun u ahaa kooxda isqarxisay iyo diyaarintii weeraradaasi.
Xilli sii horeysay, qareenka u doodaya Salax Cabdisalam waxa uu sheegay in ninkan uu la shaqeynayay dowladda Belgium, laakiin uu ka dagaallamayo in Faransiiska lagu wareejiyo. Waxaa weeraradii Paris ku dhimatay 130 qof.